Sweden oo xaalad xukumad la'aan wajaheysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iisalwasaare Stefan Löfven (S) oo shir saxaafadeed xlay ka hadlayey ka dib markii uu la kulmey hogaamiyaasha mucaaradka. Foto: Maja Suslin/TT.
Sweden oo xaalad xukumad la'aan wajaheysa
Mowqifka SD iyo fartiinta Alliansen
La daabacay onsdag 3 december 2014 kl 11.19
Shalay galab ayey aheyd markii xisbiga Sverigedemokraterna cadeeyeen mowqifkooda, sheegeen-na in ay codka siin coodaan miisaaniyadda xisbiyada Alliasen. Fartiinta SD ayaa xaalad adag siyaasadeed dalka ka abuurtey.
Matias Karlsson oo ah siihayaha hogaanka xisbiga SD ayaa shalay galab sheegay in xisbigiisa ridi doono xukumad kasta oo aan wax ka bedelin siyaasadda qaabilladda qaxootiga iyo soogalootiga ama aan iyaga la tashan.
Markii xisbigan cadeeye mowqifkiisa ayaa ra'iisalwasaaraha Sweden u gacan haatiyey afarta xisbi ee hanti goosadka ah ee ku bahoobeyn Alliansen. Löfven waxuu ka codsadey xisbiyadan in gacan ku siiyaan sidii miisaaniyadda xukumadda u meelmari laheyd. Laakiin Mocaaradka ayaan jawaabta la soo daahin. waxay ku wargeliyeen Löfven in Alliansen codkla siin doonaan miisaaniyadooda ay wado jirka u soo bandhigeen. aysana aheyd masuuliyadda mucaaradka ka caawinta xukumadda meelmarinta miisaaniyadeeda.
Sweden waa in xukumad kasta miisaaniyadeeda ay ku shaqeyneyso sannad kasta taageero uga heystaa inta badan xil-dhibaanada baarlamaanka. Marka laysku geeyo Afarta xisbi ee Hanti goosadka ah ee Alliansen iyo weliba SD xildhibaanada ay ku leeyahiin baarlamaanka wey ka badan yahiin xildhibaanada xisbiyada dowladda wadaaga ah waa socialdemokraterna iyo Miljöpartiet oo taageero ka helaya Vänstepartiet.
Cod siinta miisaaniyadaha
Maanta ayaa baarlamaanka cod u qaadi doonaa miisaaniyadaha kalo gedisan ee xisbiyada mucaaradka iyo tan xukumadda. Marka hore waxaa codka loo qaadaya miisaaniyadda xisbiga SD iyo midda Alliansen. Ka bacdiina waxaa laysku barbardhigi doonaa miisaaniyadda Alliansen iyo tan xukumadda. Haddii SD ka dhabeyso hanjabaada ah in ay codka siin doonaan miisaaniyadda Allinsen, ayna dhamaan xildhibaanada afarta xisbiga ee hanti goosadka ah u codeeyaan miisaaniyadda Alliansen markaas tan xukumadda waa laga cod badanayaa.
Stefan Löfven ayaa horey u sheegay in haddii miisaaniyadda Alliansen noqoto midda aqlabiyadda Baarlamaanka hesha in uusan ku shaqeyn doonin miisaaniyadaas.
Taas micnaheeda waxay noqon kartaa: Kow in uu iscasilo oo afhayeenka baarlamaanka lagu celiyo go'aanka ah xisbiga soo dhasi kara xukumad cusub. Ama in ku dhawaaqo doorasho cusub oo lagu soo doorto xildhibaano cusub.